Iyini i-toxoplasmosis futhi ithinta kanjani ukukhulelwa? Bezzia
UToñy Torres | 11/05/2022 23:55 | Ukukhulelwa
I-Toxoplasmosis yisifo esithathelwanayo, esibangelwa i-microscopic organism ebizwa ngokuthi "toxoplasma gondii" yingakho igama layo. Noma ubani angathola lesi sifo, kodwa uma kuziwa owesifazane okhulelwe izingozi zingaba yingozi. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukuvimbela ukutheleleka ngokugwema ukusetshenziswa kokudla okuthile okungase kube ne-protozoan ebangela ukutheleleka.
Lokhu kungenxa yokuthi i-parasite ebangela ukutheleleka ingawela i-placenta futhi ithele umbungu, okungadala isifo sokuzalwa, okungukuthi, ngaphambi kokuzalwa. Uma lokhu kwenzeka emasontweni okuqala okukhulelwa, umbungu ungabhekana nezinkinga ezihlukahlukene ekukhuleni kwayo, nemiphumela emibi kakhulu. Lapha sikutshela konke odinga ukukwazi ngakho i-toxoplasmosis nokuthi ithinta kanjani ukukhulelwa.
1 I-Toxoplasmosis ngesikhathi sokukhulelwa
1.1 Izingozi ku-fetus
1.2 Vimbela i-toxoplasmosis ngesikhathi sokukhulelwa
I-Toxoplasmosis ngesikhathi sokukhulelwa
I-Durante ukukhulelwa Kuyadingeka ukulandela imihlahlandlela nezincomo ezithile mayelana nokudla neminye imikhuba, ngoba kunezingozi ezahlukahlukene ekukhuleni kombungu. Omunye wabo ukutheleleka kwe-toxoplasmosis, isifo esingatholwa ngezindlela eziningana ezahlukene.
Ngokudla inyama okuncane noma okungaphekiwe kahle futhi iqukethe i-parasite.
Ngezinsalela ze-parasite ezingase zibe khona endle yekati.
Ngokuthelelana ku ngaphesheya kwe-placenta kusuka kumama kuya ku-fetus.
Okusho ukuthi, i-toxoplasmosis ingasakazwa isuka kumuntu iye komunye, ngaphandle kwalapho ukhulelwe. Futhi ngenxa yenkinga eyengeziwe yokuthi awukabikho umgomo namuhla, kubalulekile ukugwema ukutheleleka ngesikhathi sokukhulelwa. Ngale ndlela, izingozi ezibalulekile ziyagwenywa ekukhuleni kombungu. Ikakhulukazi emasontweni okuqala okukhulelwa, lapho ingozi ku-fetus inkulu nakakhulu.
I-Toxoplasmosis ingaba yingozi kakhulu ku-fetus, ikakhulukazi emasontweni okuqala noma kuze kufike ku-trimester yesithathu. Phakathi okungenzeka imiphumela engenzeka uma uthola ukutheleleka I-toxoplasmosis yilezi ezilandelayo.
Isisindo sokuzala esiphansi, owaziwa ngokwezokwelapha ngokuthi ukukhubazeka kokukhula.
Izinkinga zombono, kuhlanganise ubumpumputhe.
ingozi yokuphuphuma kwesisuikakhulukazi ku-trimester yokuqala yokukhulelwa.
I-Toxoplasmosis nayo ingenzeka kuthinte ukuthuthukiswa kwesimiso sezinzwa esimaphakathiubuchopho, ukuzwa, isibindi, ubende, uhlelo lwe-lymphatic ngisho namaphaphu.
Izimpawu zingahluka kakhulu esimweni ngasinye, okwenzeka njalo ukubambezeleka kokuxilongwa lapho umntwana esezelwe. Ngokuvamile Abaziswa ngeso lenyama futhi bayavela njengoba kukhona ukubambezeleka noma ukuphazamiseka ekukhuleni kwengane. Okuwukuphela kwendlela yokuthola ukutheleleka kwe-toxoplasmosis ngesikhathi sokukhulelwa yi-amniocentesis, ukuhlolwa kwe-intrauterine okwenziwa uma kunezimpawu zalokhu nezinye izinkinga.
Vimbela i-toxoplasmosis ngesikhathi sokukhulelwa
Ukuzivikela kanye nokuzwela ku-toxoplasmosis kungatholwa ekuhlolweni komtholampilo okwenziwa kusukela ekuqaleni kokukhulelwa, okuyinto ayikuvimbeli ukuthi ingatholakali ngesikhathi sokukhulelwa. Ukuze ugweme lokhu, kufanele ulandele iseluleko sombelethisi wakho, okuzoba okulandelayo ngokujwayelekile.
Ungayidli inyama engaphekwanga kahle kanye/noma iqhwa ngaphambilini.
Gwema ukudla okudliwa luhlaza, njengamasoseji noma i-carpaccio.
thatha kuphela ubisi kanye ne-derivatives ukuthi kukhona pasteurized. Okusho ukuthi awukwazi ukuthatha i-meringue noma imikhiqizo equkethe iqanda eliluhlaza.
Uma unamakati, kufanele nje gwema ukuthintana nendle okuyindawo lapho kutholakala khona izinsalela zalesi silwane uma kwenzeka isilwane sidle ezinye izilwane eziluhlaza futhi sesingenwe yilesi sifo.
Lokhu akusho ukuthi kufanele uhambe ekati lakho, vele uyeke ukuhlanza ibhokisi likadoti lekati lakho futhi uvumele abanye abantu bakwenze. Futhi uma uzodla ngaphandle, qiniseka ukuthi ukhetha imikhiqizo ephekwe kahle, gwema imifino eluhlaza uma kwenzeka bengahlanzekile kakhulu futhi okubaluleke kakhulu, ujabulele ukukhulelwa kwakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » UMadres » Ukukhulelwa » Iyini i-toxoplasmosis futhi ithinta kanjani ukukhulelwa?